June 2019 – Trend.com.mm
ကျွတ်လွန်းအားကြီးတဲ့ ဆံသားတွေကို စိတ်ညစ်လွန်းအားကြီးလွန်းလို့ စိတ်ပျက်နေပြီလား။ ဆံပင်တွေကျွတ်တာဟာသိပ်ကိုမုန်းတီးနှမြောဖို့ကောင်းတဲ့အရာကြီးပါပဲ… 🙁 တစ်ချို့သောနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကသင့်ရဲ့ ကတုံးတုံးချင်စိတ်ကိုအချိန်မှီကယ်တင်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်နော်… (၁) » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, LifestyleLeaveaComment on ဆံပင်တွေကျွတ်လွန်းအားကြီးလို့ ကတုံးတောင်တုံးချင်စိတ်ပေါက်လာတဲ့အခါ…
Posted on June 30, 2019 June 26, 2019 by Shun Lei Phyo
လက်ဖက်နှပ်ပြီးသားကိုဈေးဆိုင်မှာအလွယ်တကူဝယ်လို့ရပင်မဲ့ ကိုယ်တိုင်အညွန့်ကိုဝယ်ပြီးနှပ်တာလောက်တော့ ကောင်းနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်စွာအသင့်နှပ်ထားတဲ့လက်ဖက်တံဆိတ်တွေရှိပင်မဲ့ ကိုယ်တိုင်သာ အိမ်မှာ နှပ်တတ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်အရသာကို ပုံသွင်း ပြီး » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, LifestyleLeaveaComment on အိမ်လုပ်လက်ဖက်နှပ်ကိုမှသိပ်ကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအတွက်….
Posted on June 30, 2019 June 28, 2019 by Shun Lei Phyo
တစ်ခါတစ်လေအလုပ်သိပ်လုပ်ရတဲ့မျက်လုံးဟာ မထင်မှတ်ထားတဲ့မျက်ရည်ပူတွေကျလာတတ်ပါတယ်. မျက်လုံးထဲကနေ ၀မ်းနည်းငိုကြွေးခြင်းမရှိပဲ မျက်ရည်ပူ သက်သက်ကျတာခြင်းမျိုးကို တစ်ခါမဟုတ်တစ်ခါတော့ကြုံတွေ့ ကြမှာပါ။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာရတာလဲ? ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on မျက်ရည်ပူကျတတ်တဲ့သူတွေအတွက်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကောင်းလေးတွေက…
Posted on June 29, 2019 June 28, 2019 by Shun Lei Phyo
သိပ်ချစ်ရတဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်သင်ရနေပြီဆိုရင်တော့ ပြန်တွေးကြည့်တိုင်းနောင်တမရလေအောင် သူနဲ့အတူတူလုပ်ကို လုပ်သင့်တဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်။ မလုပ်ရင်သေနိုင်တယ်ဆိုတာလောက်ထိတော့အရေးမကြီးပင်မဲ့ မလုပ်ခဲ့ရင် နောင်တစ်ချိန်အနည်းနဲ့အများတော့နောင်တရ နေမိမှာပါ။ ဒီစာလေးကိုဖတ်ပြီးရင်တော့နောက်ကျ နောင်တမရခင်မှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, RelationshipsLeaveaComment on ကိုယ်တကယ်ချစ်တဲ့ချစ်သူတစ်ယောက်ရှိလာတဲ့အခါနောက်တစ်ချိန်နောင်တမရအောင်ဒါမျိုးတွေကိုတူတူ လုပ်ပါ…
ခေါင်းမလျှော်ထားတဲ့ နေ့ဆို ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ချက်မရှိလွန်းလို့ နေ့တိုင်း လိုလို ခေါင်းလျှော်မိနေပြီလား …ခေါင်းကိုမပျက်မကွက်လျှော်ပေးခြင်းက ကောင်းမွန်သန့်စင်ပင်မဲ့ မကြာခဏဆိုသလို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Beauty, Health, LifestyleLeaveaComment on ခေါင်းခဏခဏ လျှော်တိုင်းကောင်းတယ်လို့ထင်နေတုန်းလား?…
အုပ်ထိန်းသူတိုင်းသိထားသင့်ပါတယ်။ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆိုတာ ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်ခဲတဲ့ အ ရွယ်ပါ ။ဒီလို အရွယ်မှာ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in UncategorizedLeaveaComment on ဆယ်ကျော်သက်က လေးတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကို ဘယ်လို မွန်းမံပေးသင့်လဲ?…
Posted on June 29, 2019 June 26, 2019 by Shun Lei Phyo
ဘဲဥကြက်ဥ ကြိုက်တဲ့ ဥသရဲတွေအတွက် ဘဲဥကြက်ဥကို သူ့ချည်းပဲချက်ပြုတ်တာမျိုးမဟုတ်ပဲ တစ်ခြားအရာတွေ နဲ့တွဲဖက်ချက်ပြုတ်ကြော်ပေါင်း ပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုအရသာကောင်းတွေရလာနိုင်သလဲဆိုတာ Sharing » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Food, LifestyleLeaveaComment on ဘဲဥကြက်ဥတွေကို ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တွဲချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…
သင့်ရဲ့ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေမယ့် အစားအသောက်တွေ
Posted on June 28, 2019 by Wint
ဦးနှောက်စွမ်းရည် ကောင်းမွန်တိုးတက်ဖို့ဆိုတာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေအပြင် အစားသောက်တွေက ပံ့ပိုးပေးဖို့လည်း လိုပါတယ်။ အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပြီး မှန်ကန်တဲ့စားသောက်မှုပုံစံက အရေးကြီး ပါတယ်။ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on သင့်ရဲ့ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေမယ့် အစားအသောက်တွေ
တစ်ချို့ လူတွေအတွက် ပန်းချီက စိတ်ရဲ့ပြင်းပြမှုတစ်ခုပါပဲ.. အချို့ အတွက်တော့ ဝါဿနာပေါ့။ သင်လည်း ငယ်ငယ်တုန်းက ပန်းချီဆွဲတာကို » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Lifestyle, WellbeingLeaveaComment on ပန်းချီဆွဲခြင်းက သင့်ဦးနှောက်ကို ဒီလိုပြောင်းလဲသွားစေပါတယ်…
အစားအသောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုအစားအစာတွေက အစာချေဖျက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှကိုယ်တစ်ခုခုစားတော့မယ်ဆိုရင် ဘယ်အစားအစာက အစာကြေမြန်လဲ၊အစာကြေနှေးလဲ သိပြီး ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချတဲ့နေရာမှာလဲ အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့် ဗဟုသုတအနေနဲ့ » ဆက်ဖတ်ရန် «
Posted in Health, LifestyleLeaveaComment on ကိုယ်စားလိုက်တဲ့အစားအစာတွေ ကြေညက်ဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ယူရလဲ?